सीमा समस्या टुंग्याउन सरकार अन्तराष्ट्रिय अदालत जान तयार हुनुपर्छ | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more सीमा समस्या टुंग्याउन सरकार अन्तराष्ट्रिय अदालत जान तयार हुनुपर्छ
अहिले भारतको सस्थापन पक्ष सरदार पटेलको रणनीतिमा हिडेको छ । उसको आचरण ठिक छैन । भारतले वार्तामार्फत आफ्नो समस्या राख्नु पर्नेमा सीमा सम्बन्धी विवाद नटुंगिदै आफ्नो नक्सामा छिमेकीको भूगोल राखेर हैकमवादी चरित्रको प्रदर्शन गरेको छ । उसले सिधा सिधा नेपालमाथि अन्याय गरिरहेको छ ।
लिम्यिपाधुरासहित केहि भूगोल राजा महेन्द्रले उपहार दिएको भनेर यहाँका सबैभन्दा राष्ट्रवादी भनिएकाले टिप्पणी गरेका छन् । यदि सो भूभाग नेपाली राजाले भारतलाई दिएको हो भने खै त प्रमाण ?
नेपाल भारत सीमा सन्धि हुँदा एक नम्बर पिल्लर लीपूलेकमा गाडेको छ । पिल्लर जिरोदेखि शुरु हुन्छ । त्यो पिल्लर कहाँ छ ? त्यो पिल्लर आजसम्म देखिएको छैन । त्यो पिल्लर किन देखाएन ? त्यसैले ती विन्दु छुट्याउनलाई त्रिपक्षिय वार्ता भएन । यसमा त्रिपक्षिय वार्ता हुनुपर्छ ।
कात्तिक २४ गते, २०७६ - १५:१४ मा प्रकाशित